घरमा मुसाले सताएर दिक्क पर्नुभएको छ ? यसो गर्नुहोस « Himal Post | Online News Revolution
घरमा मुसाले सताएर दिक्क पर्नुभएको छ ? यसो गर्नुहोस
प्रकाशित मिति : २०७३, १७ चैत्र १०:२२
एजेन्सी । घरमा मुसाले सताएर दिक्क पर्नुभएको छ ? घरमा राखेको सामान मुसाले खाइदिएर, फोहोर गरेर दिक्क पर्नुभएको छ भने हामी तपाईलाई मुसा भगाउने गतिलो उपाय सजाउँछौँ जसबाट तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ । मुसा आउने जाने बाटो प्राय एउटै हुन्छ ।